Usinde kwenye ingozi uMlindo
ISALE ibheke phezulu kanje imoto ebihamba uMlindo kulandela ingozi izolo ekuseni.
FANELESIBONGE BENGU | January 13, 2020
UMCULI wasePort Shepstone, uMlindo The Vocalist, usinde engozini yemoto emgwaqweni uN2 ngaseMkhomazi izolo ekuseni.
UMlindo, ogama lakhe langempela uLindokuhle Mgedezi, kuthiwa uphume engenamyocu engozini. Okhulumela amaphoyisa aKwaZulu-Natal, uCaptain Nqobile Gwala, uthe umbiko wengozi uthunyelwe esiteshi sabo esiseMkhomazi.
“Singakuqinisekisa ukuthi kubikwe ingozi emuva kokuthi imoto igingqike kuthelawayeka uN2. Akekho olimele,” kusho uCaptain Gwala.
Ezithombeni ezisabalale ezinkundleni zokuxhumana kubonakala sengathi lo mculi wodumo lwezingoma okubalwa kuzo aMacala, AmaBlesser, Egoli nezinye, ubehamba ngeMercedes-Benz emnyama. Ibonakala ilele ngokhakhayi, amasondo ebheke phezulu.
Omunye othi udlule kuyo ingozi uveze ukuthi lo mculi ubengashayeli, kushayela abehamba naye. Ezithombeni ubonakala ethule kanti kwesinye uhleli phansi, kukhona amaphoyisa eduze kwakhe.
Imizamo yokumthola izolo ayiphumelelanga njengoba ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa. Uzanywe izikhawu eziningi. Imenenja yakhe, uNyiko Bilankulu, ithe isazama ukuthola imininingwane eqondile ngaphambi kokuthi iphawule. Icele ukushayelwa emuva kwemizuzu engu-30. Isizanywa ucingo belungasangeni.
UMLINDO The Vocalist emuva kwengozi yemoto izolo ekuseni
Ekuqaleni kukaDisemba, uMlindo ube sengozini yemoto eThekwini walaliswa esibhedlela esiseBallito.
Esitatimendeni asikhipha, wathi walimala nethimba lakhe nokwaholela ekutheni aphuthwe ngeminye imicimbi.
Phakathi kwemicimbi angayanga kuyo kubalwa iMetro FM Heatwave.